लगानी | गृहपृष्ठ | Page 1396
कम्पनीको शेयरमूल्य १ वर्षको कारोबार अवधिमा अधिकतम रू. १८६ र न्यूनतम रू. ९४ पुगेको छ । सोमवार कम्पनीको शेयरमूल्...
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्वेडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । असार २६ गते विजय लघुव...
बैंकले मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिबद्धता बुझाएको छ । यसअघि बैंकले संस्थापकतर्फको ९ लाख ५ हजार...
कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । चालू आवको ९ महीनामा कम्पनीले रू. ९ कर...
कम्पनीको शेयरमूल्य १ वर्षको कारोबार अवधिमा अधिकतम रू. २ हजार ८७४ र न्यूनतम रू. १ हजार ५७७ पुगेको छ । सोमवार कम...
सिभिल लघुवित्त वितीय संस्थाको कम्पनी सचिवमा अव आचार्य
असार ३०, काठमाडौं(अस) । सिभिल लघुवित्त वितीय संस्थाको कम्पनी सचिवमा विनोद आचार्य चयन भएका छन् । कम्पनीको असार...
नमस्ते वित्तिय संस्थाको विशेष साधारण सभा
on: May 23, 2016 लगानी
जेठ १० ,काठमाडौं । नमस्ते वित्तिय संस्था लिमिटेडको विशेष साधारण सभा जेठ २९ गते सिटी गार्डेन प्रालि , उमेश मार्ग घोराही, दाङमा हुने भएको छ । सभामा चुक्ता पूँजीको १. १ अनुपातमा हकप्रद शे...	बिस्तृतमा
ग्रोमोर मर्चेण्टको साधारण सभा
जेठ १०, काठमाडौं । ग्रोमोर मर्चेण्ट बैङ्कर लिमिटेडको सातौं वार्षिक साधारण सभा जेठ ३१ गते होटल डेला अन्नपूर्ण, काठमाडौंमा हुने भएको छ । सो सभामा २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताब गरिएको छ ।...	बिस्तृतमा
हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा नेप्से परिसूचक
जेठ १०, काठमाडौं । सोमबार नेप्से परिसूचक १४ दशमलव ६८ अङ्कले बढेको छ । कारोबार शुरु भएको करीब ३० मिनेटको व्यापारमा नेप्से परिसूचकमा करेक्सन देखापरेको थियो । त्यसको केही समयमा नै उकालो लाग्न थ...	बिस्तृतमा
हिमालयन जनरलको साधारण सभा
जेठ १०, काठमाडौं । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको २०७३ असार १४ गते २२ औं वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ । सो सभाले प्रस्तावित २० प्रतिशत बोनश शेयर र १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश पारीत गर्ने छ...	बिस्तृतमा
सगरमाथा फाइनान्सको बोनश राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत
जेठ १०, काठमाडौं । सगरमाथा फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेको १५ दशमलव ८५ प्रतिशत बोनश शेयरलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृत गरेको छ । सो प्रस्ताव कम्पनीको साधारण सभाबाट पारीत...	बिस्तृतमा
जेठ १६ बाट खानी खोलाको साधारण शेयर
on: May 22, 2016 लगानी
जेठ ९, काठमाडौं (अस) । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जेठ १६ गतेबाट ९ लाख ३१ हजार ४ सय २९ कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । छिटोमा जेठ १९ गतेदेखि ढिलोमा जेठ ३० गतेसम्म खुल्ने...	बिस्तृतमा
जेठ २६ मा मञ्जुश्रीको विशेष साधारण सभा
जेठ ९ , काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युशन लिमिटेडको विशेष साधारण सभा जेठ २६ गते थापागाँउ ब्याङ्क्वेट , नयाँबानेश्वर ,काठमाडौंमा हुने भएको छ । सभामा चुक्ता पूँजीको एक बराबर...	बिस्तृतमा
७.५४ अङ्कले बढ्यो नेप्से (१२ः३० बजेको अपडेट)
जेठ ९, काठमाडौं । आइतबार नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ५४ अङ्कले बढेको छ । १ हजार ४ सय ९९ दशमलव ३६ विन्दुबाट खुलको बजार आधा घण्टाको व्यापारमा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले बढेर १ हजार ५ सय ६ दशमलव ८६ वि...	बिस्तृतमा
६.२३ अङ्कले बढ्यो नेप्से (१ः३० बजेको अपडेट)
जेठ ९, काठमाडौं । आइतबार नेप्से परिसूचक ६ दशमलव २३ अङ्कले बढेको छ । बजार खुलेको १ घण्टा ३० मिनेटको व्यापारमा शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर १ हजार ५ सय ५ दशमलव ५५ विन्दुमा पुगेको छ । यस व्याप...	बिस्तृतमा
१० अङ्कले बढ्यो नेप्से, १५०९ बिन्दुमा परिसूचक
जेठ ९, काठमाडौं । साताको पहिलो व्यापार दिनमा नेप्से परिसूचक १० दशमलव शून्य ७ अङ्कले बढेको छ । कारोबार शुरु भएको करीब १ घण्टाको व्यापारमा नेप्से परिसूचक उच्च विन्दु १ हजार ५ सय १० मा पुगेर के...	बिस्तृतमा